Soo-saareyaasha Rootooyinka & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad Robotka Shiinaha
Afarta dhidibka Robot Taxanaha Afarta taxane robot dhidibka JZJ100B-230 100KG Afarta dhidibka taxanaha robot JZJ25B-180 25KG Afarta dhidibka taxanaha robot JZJ15B-140 15KG Hordhac kooban oo ah robot maaraynta otomaatiga ah: 1. Robot rarka iyo dejinta wuxuu leeyahay xamuul fara badan oo ka kala socda dhowr kiilo ilaa dhowr boqol oo kiilogaraam; 2. Xawaaraha socodku waa dhakhso oo la hagaajin karaa; 3. Ficil dabacsan, wuxuu dhammaystiri karaa maaraynta iyo rarka iyo dejinta hawlaha adag; 4. Isku halaynta sare iyo s ...
Lix taxane Robot Taxanaha Lixda taxane robot dhidibka JZJ50A-270 （100A270） 50KG Lix taxane robot axis JZJ06A-090 6KG Lix taxane robot axis JZJ10A-160 10KG Lix taxane robot axis JZJ20A-180 20KG Hordhac kooban oo ah robot wax qabad toos ah: 1. rarka iyo soo dejinta robotka waxay leedahay xamuul fara badan oo u dhexeeya dhowr kiilo ilaa dhowr boqol oo kiilogaraam; 2. Xawaaraha socodku waa dhakhso oo la hagaajin karaa; 3. Tallaabo debecsan, dhammaystiri kara maaraynta adag iyo loa ...
Qalabka alxanka ee alxanka alxanka taxanaha JZJ06C-180 alxanka taxanaha robotka JZJ06C-144 taxanaha robot alxanka JZJ06C-160 alxanka taxanaha robot taxanaha JZJ06C-200 Warbixin kooban robot waa robot warshad ku hawlan alxanka (oo ay ku jiraan goynta iyo ku xereen). Marka loo eego qeexitaanka ururka caalamiga ah ee Jaangooyada (ISO) in aaladaha warshadaha ay iska leeyihiin robot alxanka caadiga ah, aaladaha warshadaha waa ujeedo badan, barnaamij lagu celcelin karo ...